Blaogy tantaran’i Mokattam · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jona 2019 3:18 GMT
(Ny Mokattam Blog Tales dia anisan'ny tetikasa nahazo vatsy ara-bola avy amin'ny Rising Voices)
Jereo amin'ny sarintany lehibe kokoa ny Mokattam Blog Tales
Tamin'ny taona 1992, nisy horohoron-tany mahery vaika namely ny tanànan'i Kairo, ka 370 no namoy ny ainy, betsaka ny maratra, ary mbola marobe ihany koa no nafindra toerana. Tafavoaka velona tamin'io loza io, mponina an'arivony no nalaina sy nanomboka nipetraka tamin'ny faritra iray izay ao amin'ny manodidina an'i Masaken Alzelzal – Alhadba Alwosta (izay azo adika tsotsotra hoe Manodidina ny Horohorontany), eo akaikin'ny tendrombohitra Mokattam malaza. Ankehitriny izany lasa tanàna itatry ny renivohitra Ejyptiana ahitana mponina tsy mitsaha-mitombo.
Miaina olana ara-piarahamonina mahazatra any amin'ny faritra marobe midadasika (metropolitana) ity faritra maroloko ity, toy ny tsy fahampian'ny asa sy ny tolona hahazoana tolotra fototra. Na dia izany aza, betsaka lavitra tsy araka ny hita ny zava-misy ao amin'ity faritra ity, ary hiara-hiasa amin'ny zatovo ao amin'ny faritra ny tetikasa Mokattam Blog Tales mba hilaza ny tantaran'ny fiarahamonin'izy ireo.
Hiara-hiasa amin'ny FTMF Alwan & Awtar i Nesma Geiwely avy ao amin'ny Tetikasa Namaa, ary hampiseho ny tanora any amin'ny faritra amin'ny fomba ahafahan'izy ireo mampiasa fitaovana fampitam-baovaon'olon-tsotra toy ny kamerà nomerika, kamerà lahatsary, ary bilaogy ho ampiasaina amin'ireo talenta vaovao amin'ny fampisehoana ny kanto hanehoan'izy ireo hevitra. Ankoatra ny fakàna sarin'ny maha-zava-dehibe ny fiainana andavanandro ao Mokattam, hanadihady ny mponina ao an-toerana ihany koa ny zatovo ary hampiseho lafiny hafa eo amin'ny fiainana ao amin'io tanàna itatr'i Kairo io.
Ireo lahatsoratra farany momba ny Mokattam Blog Tales
19 Janoary 2011
Tranonkala: Mokattam Blog Tales (ho avy tsy ho ela)
Bilaogy Tetikasa: Mokattam Blog Tales RSS
19 ora izay